गहिरो श्वास लिनाले स्वास्थ र जीवनशैलीमा सुधार - नेपालबहस
गहिरो श्वास लिनाले स्वास्थ र जीवनशैलीमा सुधार
| १३:०९:१४ मा प्रकाशित
अहिले कोरोना भाइरसको महामारीमा प्राय सबै जना घरमै छाैँ । के तपाईलाई थाहा छ, यो समयमा दैनिक केही समय गहिरो श्वास लिनाले तपाईको स्वास्थ र जीवनशैलीमा धेरै सुधार हुन्छ ।
जब तपाई चिन्तित या हैरान बन्नुहुन्छ, तब तपाईको मुटुको धड्कन लगातार छिटो हुन्छ । रगतको प्रवाह तपाईको मुटु र मस्तिष्कतर्फ बढ्छ । यसबाट बच्नका लागि गहिरो श्वास लिने अभ्यास तपाईले दैनिक गर्नुपर्छ ।
गहिरो श्वास लिनाले चिन्ताजनक विचार र घबराहटबाट छुटकारा मिल्छ । हृदयको गति सुस्त हुन्छ । यसबाट शरीरले धेरै अक्सिजन पाउँछ । हर्मोन सन्तुलित हुन्छ । कोर्टिसोलको स्तर कम हुन्छ । कोर्टिसोल स्ट्रेस हर्मोन हो । जब कोर्टिसोलको स्तर निकै अधिक समयसम्म रहिरहन्छ, तब यसले अधिक नोक्सान पु¥याउँछ । दैनिक भास्कर
आदा खोलामा डोजर पहिरोले पुर्दा दुई जना बेपत्ता ३ दिन पहिले
देउवालाई प्रधामन्त्री बनाउनु पञ्चायती ब्यवस्था ब्युँताउनु हो: प्रधानमन्त्री ओली ४ दिन पहिले
पानीजहाजको सब स्टेशन निर्माणस्थल निरीक्षण १ दिन पहिले
सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु हेरफेर ३ हप्ता पहिले
ओलीले बाेलाए मन्त्रिपरिषद बैठक ३ हप्ता पहिले
शब्दयात्राले तीन स्रष्टालाई सिर्जना सम्मान दिने ४ हप्ता पहिले
वृद्धा सासुको सम्पत्ति लिएर हेरचाह नगर्ने सुष्माका श्रीमान पक्राउ २ महिना पहिले
बजार ईण्ट्राडे हाईमा बन्द हुँदा आजको बजार बिश्लेषणले के देखायो ? १० महिना पहिले
अमेरिकी रक्षामन्त्रीमा एस्पर नियुक्त, इरानसँगको विवाद कसरी सुल्झेला ? २ वर्ष पहिले